सकारात्मक र विवेकको कुरा गर्नेहरु विवश बन्न बाध्य बनाइएको देश हो यो | हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ पुष २८, मंगलवार ०३:३०
जब राजनीतिक संकट पैदा हुन्छ, त्यसले राज्यका हरेक क्षेत्रलाई असर गर्छ । हरेक नागरिकका दृष्टिकोण हुन्छन्, र उनीहरु बोल्छन्, बोल्नु पर्छ । अहिले राजनीति संकटको अवस्था त राजनीतिले नै सिर्जना गरेको हो नि ।
यसै सन्दर्भलाई लिएर पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले बोल्नु भयो । उहाँहरुले कानुनविदका रुपमा बोलेको भए राम्रो हुन्थ्यो, पूर्वप्रधानन्यायाधीश नभनेको भए हुन्थ्यो । तर उहाँहरुलाई जुन तुच्छ गाली गलौज गर्ने काम भैरहेको छ, त्यो अस्लिलता र असभ्यता हो ।
उनीहरु यो देशका कानुनका विज्ञ हुन् । उनीहरुको मतसँग असहमत हुन सकिन्छ, तर थुप्रै मानिस असभ्य टिप्पणी गरेर उनीहरुको मानमर्दन गरिरहेका छन्, र त्यसो गर्नेले सोच्नु आवश्यक छ, त्यसो गर्दा तपाइँ कति इमान्दार हुनुहुन्छ ? स्वार्थी मानिसहरु अर्काको घोडा भएर मान प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छन् । मलाई के थाहा छ भने यी न्यायाधीश बेकम्मा मानिस होइनन् । यिनीहरु गोजीबाट टिपेर न्यायाधीश बनाइएका पनि होइनन् । यी आफ्नो क्षमताले न्यायाधीश बनेका होइनन् ।
नेपाली समाज अहिले पथभ्रष्ट भएको छ ।
१. नेपालमा अस्लिल कुरा गर्न, विकृति फैलाएर, अर्काको कुरा काटेर आफू राम्रो हुने, बनाउने कुरा होइन भत्काउने कुरा मात्र सोच्ने र आफ्नो प्रशंसा गरेर आफूलाई ठूलो देखाउनेको संख्या ठूलो छ ।
२. अहिले राष्ट्र संकटमा छ । कथित परिवर्तनकारीहरु राष्ट्रको बारेमा होइन, आफ्नो स्वार्थ र लाभको लागि जुनसुकै गलत कुरा गर्न तत्पर छन् ।
३. देशको समृद्धिको आकांक्षा मर्माहत भएको छ ।
४. ससांरमा ती मानिसले मात्र देशलाई संकटबाट निकालेका छन् जसले विवेकको प्रायोग गर्छन् । समस्यामा प्रतिक्रियामात्र गर्नेहरु खतरनाक प्राणी हुन्छन् ।
५. यो देश सकारात्मक र विवेकको कुरा गर्नेहरु विवश बन्न बाध्य बनाइएको देश हो । न्याय मारिएको छ । ढाँटले खाएको छ । चोर्नेले पदक पाउँछ, लुट्ने नेता बनेको छ ।
अहिले हर असल मानिसले देशका बारेमा चिन्ता गर्ने बेला हो । वर्तमान हेरेर भविष्यको अनुमान गर्ने बेला हो । सतर्क बन्नुहोस् र सही बाटो देखाउनु होस् ।
झापाको भुटानी शरणार्थी शिविरमा आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु
Spread the lovemoreचितवन । चितवनको कालिका नगरपालिका–१ मा रहेको चतुर्मुखी सामुदायिक वनमा भाले बाघ मृत भेटिएको छ । डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी बालकृष्ण खनालका अनुसार सामुदायिक वनबाट काठ निकासी गर्ने स्थान नजिक कागतीको झाङमा अन्दाजी चार वर्षको भाले बाघ मृत भेटिएको हो । उनका अनुसार मृत बाघलाई वन कार्यालय […]
२०७७ फाल्गुन ३, सोमबार १९:५०
नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति सीमित र सङ्कुचित हुँदै ?
२०७७ कार्तिक ३०, आईतवार १४:४८